VaChamisa Vanoti Nhaurirano naVaMnangagwa Dzinogona Kugadzirisa Zvinhu
Kukadzi 12, 2020
MDC President Nelson Chamisa In Chinhoyi
Mutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa, vanoti nhaurirano pakati pavo nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, ndidzo chete nzira yekubudisa nyika mumatambudziko airi.
Vachitaura nevatapi venhau muBulawyo nezuro VaChamisa vakati maonero avo ndeekuti dambudziko guru riri kuita kuti nyika irambe iri mumatambudziko inyaya yemakakatanwa anoramba achiitwa munyaya dzesarudzo.
Vakati kunyange zvichiratidza sechinhu chakaoma panofanirwa kuve nenhaurirano pakati pavo naVaMnangagwa.
VaChamisa vakati ivo semutungamiri vanogona kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire uye izvi zvigobudirira asi panogona kuve nekudeuka kweropa izvo vakati hazvifanirwe kuitika, asi kuti pangove nenhaurirano dzekupedza makakatanwa ari pakati pavo naVaMnangagwa.
VaChamisa vakati rimwe dambudziko guru riri kudzorera nyika kumashure inyaya yehuwori . Vakabvuma kuti kune mamwe makanzura nevamiriri veparamende vebato vanobatwawo munyaya dzehuwori asi vakati vose vanoita izvi vachadzingwa mubato.
VaChamisa vakati bato ravo riri kutora danho rekuti vatungamiri vose vasaine mhiko inodzivirira huwori.
VaChamisa vakati chimwe chezvinhu chinokanganisa makanzura avo kuti aite basa nemazvo inyaya yekupindira nenzira isina kunaka kwehurumende mukutongwa kwematunhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvekutongwa kwematunhu VaJuly Moyo panyaya iyi.
Asi mutevedzeri wavo, Amai Mariani Chombo, vanoti bazi ravo rinopindira mumakanzuru kana richinge rakumbirwa nevagari kuita izvi.
VaChamisa vaita musangano nevakuru vakuru vebato ravo vedunhu reBulawayo pasi pechirongwa chavari kuita munyika mose nenhengo dzavo asi musangano uyu wange usingapindwe nevatapi venhau.
Mune imwewo nyaya sangano rePolitical Actors Dialogue, kana kuti Polad, rinoti ratora chisungo chekuti hurumende imbomira kuvandudza chimwe chikamu chebumbiro remitemo yenyika.
Sachigaro wekomiti inoona nezvemitemo muPolad, Muzvinafundo Lovemore Madhuku, vaudza Studio7 mushure memusangano wePolad muBulawayo kuti vari kutarisira kusangana nemutungamiri wenyika nemusi weMuvhuro kuti vasvitse chisungo ichi.
Pamubvunzo wekuti Polad inofungei nemaonero ekuti VaMnangagwa naVachamisa vanofanirwa kutaurirana kuti nyika ienderere mberi, VaMadhuku vati havabvumirane nemaonero aya vachiti nyika haingatadze kufambira mberi nekuda kwekusawirirana kwevanhu vaviri.
Vesangano rePolad vange vane musangano nemapazi ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira hofisi yemuchuchisi mukuru pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission senzira yekuzeya matambudziko akatarisana nenyika kusanganisira nyaya dzehuwori uye kusave nekuwirirana nerunyararo ruzere munyika.